भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? नहेर्नुस यी तस्बिर – Himal Post | Online News Revolution
भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? नहेर्नुस यी तस्बिर
himal post २०७५, २७ जेष्ठ १८:५४ June 10, 2018
के तपाईं भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? के तपाईं यहाँ दिइएका तस्बिर हेरेर बताउन सक्नुहुन्छ कि आखिर यसमा के भएको होला जसको वास्तविकता अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । आज हामी तपाईंलाई केही यस्ता फोटो देखाउँदैछौं । यी फोटोमा केही मानिसहरुले यस्ता कुरा देखेका छन् जसको वास्तविकता थाहा पाउन निकै मुश्किल छ ।
माथि दिइएको इंगल्याण्डको स्रोपसायरको यो तस्बिरले धेरै मानिसलाई चकित तुल्यायो । वास्तवमा फुटबल वर्ल्डकप हेरेपछि केही साथीहरुले एक चौरमा पार्टी गरे । यसै क्रममा एकजना साथीले तीनजनाले रमाइलो गरिरहेको फोटो खिचे तर पछि फोटो हेर्दा उनीहरुले पछाडि भिन्न वस्तु भएको थाहा पाए ।
फोटोमा उनीहरुले पछाडिको एउटा पुरानो भवनको झ्यालबाट अचम्मको वस्तुले हेरिरहेको देखे । फोटो जुम गरेर हेर्दा कुनै महिला बच्चा लिएर उभिरहेको देखियो । जब सबैले आखिर त्यो के वस्तु हो भनी पत्ता लगाउन भवन वरिपरिकालाई सोधे तब उनीहरुले त्यहाँ कोही पनि नबस्ने र वर्षौंदेखि उक्त भवन खाली भएको थाहा पाए ।
मानिसहरुले बताए उक्त स्थानको वास्तविकताः
त्यसबारे सटिक जानकारी प्राप्त गर्न उनीहरुले उक्त फोटो सोसल मिडियामा सेयर गरे जसमा केही व्यक्तिले कमेन्ट गरेर उक्त भवनमा एक महिला र बच्चाको आत्मा भट्किने गरेको बताए ।
यद्यपी, यो कहानीमा कति वास्तविकता छ त्यो भने पुष्टि भएको छैन ।
सय वर्ष अघिको यो फोटोमा यी महिलाको काँधमा कसले हात राखे ?
भूतलाई विश्वास नगर्नेहरु यो फोटोलाई क्यामराको लंग एक्सपोजर बताउँछन् तर यस्तो पटक्कै होइन ।
लीड्सको एक अस्पतालमा यो फोटो एक कर्मचारीले खिचेका थिए । यो अस्पतालको करिडोरमा अचम्मको आवाज आउने गरेको खबर सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
यो कारमा कोही पनि थिएन तर साइडको सिसामा तपाईंले एउटा अनुहार देख्नुहुन्छ ।
क्विनल्याण्डका किम डेविडसनले उनको यो फ्यामिली फोटोमा एक महिलाको भूत कैद गरेको जो सय वर्ष अघि यसै स्थानमा डुबेर मरेको भनी दाबी गरेका छन् ।
धेरैले यो फोटोलाई कुनै वस्तुको रिफुलेक्सन मान्छन्, तर यस्तो होइन भनी दाबी गरिएको छ ।
वर्षौं पहिले बन्द भएको संग्रहालयको सिसिटिभीमा कैद भएको दृश्य ।
पुरुषले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माए
मैले डोनाल्ड ट्रम्पसँग यौनसम्पर्क गरेकी थिएँ:पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल